Toriteny 22 martsa 2020
Bienvenue ! Enseignements Predications Toriteny 22 martsa 2020
Henoy eto ny >> TORITENY <<
Ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva anie ny Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika.
Miarahaba antsika mpianakavin'ny finoana amin'ny Anaran'i Jesosy Tompo sy Lohan'ny Fiangonana. Efa alahady roa androany isika no tsy afaka nandeha tany am-piangonana. Fantatro ny fahabangana aterak'izany eo amintsika tsiairay avy, na ny lehibe na ny kely.
Miezaka anefa ireo tompon'andraikitra mba tsy hisy ho diso anjara isika rehetra, indrindra fa ny mba handrenesantsika ny Tenin'Andriamanitra.
Marihiko eto fa misy ireo tamba-jotra serasera ka ahazoantsika manaraka ny fotoam-pivavahana Loterana, satria araka ny fantatsika, dia tsy afaka mandeha mivavaka any am-piangonana intsony koa ny any Madagasikara noho ity valan'aretina "coronavirus" ity
Ho antsika mpiankavin'ny finoana eto amin'ny Fitandremana Paris sy ny fitandremana Orléans, dia ity ny Toriteny izay hatolotra antsika sady ho fampaherezana antsika mpianakavin'ny finoana.
Jesosy hivantana ao am-pontsika tsirairay amin'ny alalan'ny Teny.
Araka ny efa voalazako teo aloha, dia mamporisika antsika hanao fotoam-pivavahana isan-tokatrano. Misy toro-lalana izay nomeko antsika, dia afaka arahintsika izany.
Pastora Edmod RAHARIJAONARIVELO
Perikopa ny Alahady faha 3 alohan'ny Paska
TT: Isaia 49.8-13
Leksiona : Salamo 84:1-4
Filazantsara : Jao. 6: 1-15
Toriteny : Jao. 6: 24-36
Hoy Jesosy: (ity no ivon'ny teny anjarantsika)
"IZAHO no Mofon'aina ; izay manatona Ahy tsy mba ho noana ; ary izay mino Ahy, tsy mba hangetaheta intsony." Jao. 6:35
Tsy misy tsy mihina-kanina raha mbola zava-manan'aina koa, na olombelona na biby na zava-boahary. Raha tsy misakafo ireo, dia mazava ho azy fa fahafatesana no miandry azy.
Midika izany fa tena zava-dehibe ny sakafo ary tena foto-pivelomana izany mba hitohizan'ny zava-boahary sy ny zava-manan'aina rehetra ho velona.
Ny hoe Mofo, dia teny entina hilazana fa tena fototra hivelomana izany.
Teo amin'ny famoronana, dia hitan'Andriamanitra fa TSARA ny ny zava-boahary noforonina Miverimberina in-6 io teny hoe TSARA io ao amin'ny Gen.1 ary ny teny fahafito "TSARA INDRINDRA" .
Asan'ny tanan'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, Ilay Telo izay Iray, taratra amin'ny fahafenoany teo amin'ny famoronana.tamin'ny alalan'ny Teny hoe "Misia". Fa miavaka kosa amin'ny zava-boahary ny olombelona satria novolavolain'ny tanan'Andriamanitra izy, araka ny voasoratra hoe "Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, ary araka ny tarehiny no namoronany azy"(Gen.1:26).
Ary ny olombelona no endrik'Andriamanitra, feno sy tanteraka indrindra. Ny Ray namolavola matiera, ny Fanahy Masina nanisy endrika araka ny fahatsaran'Andriamanitra ary ny Zanaka, nanome Aina, fahavelomana, araka ny Teny hoe "fa IZY no nisiam-piainana", tao Aminy ny Fiainana (Jao. 1:4).
Raha tsy teo ny olombelona, dia banga ny zava-boahary noforon'Andriamanitra.
Azo lazaina ary fa miavaka tanteraka amin'ny zava-boahary rehetra ny olombelona, tsy amin'ny Teny (fitenenana) ihany fa nomen'Andriamanitra saina sy fahalalana ary fahefana izy, hanjaka sy hitandrina ny zava-boahary rehetra.
Ary ny mpanao Salamo ary dia sahy milaza fa ny olombelona, dia andrian'ny zava-boaharin'Andriamanitra "natao latsaka kely noho ny anjely izy" (Sal.8:6)
Raha ny marina, dia tsy tokony hisy fahoriana na fijaliana eo amin'ny olombelona araka izay tena fikendren'Andriamanitra aminy.
Indrisy anefa fa ringan'ny areti- mandringana ny olona mandrak'ankehitriny.
Ny Soratra Masina dia manambara fa vokatrin'ny fisarahana tamin'Andriamanitra nahatonga ny ombelona latsaka tao anatin'ny fahoriana, satria nandray ozona izy tamin'ny tsy fihainony ny Tenin'Andriamanitra fa nisafidy nihaino tenin'ny devoly sy Satana.
Ary vokatr'izany, eo amban'ny fahefan'ny Satana ny olombelona, Ilay rain'ny lainga sady mpamono olona hatramin'ny voalohany.
Mamahana ny olombelona amin'ny lainga sy fitaka, ka hoy indrindra ny malagasy raha milaza izany "Mihinana ny tsy fihinana", izany hoe teny entina ilazana fa miroboka amin'ny zavatra tsy tokony hidirana izay nampidin-doza ny zavaboahary manontolo.
Tao amin'ny saha Edena, dia mampirisihin'ny Satana nihinana ilay voankazo voarara Adama sy Eva. Indrisy! Nihinana ny tsy fihinana, ka niafara tamin'ny ozona sy ny fahafatesana izany. ( Gen.3: 6, 11-13, 16,-19)
Aoka ho tsaroantsika fa Andriamanitra dia Marina sy Masina, tsy mba mizavivazy, fa rehefa tsy nankato ny Teniny ny olombelona, dia niharan'ny ozona sy fahatesana.
Indrisy! fa Satana no Mpanjakany, manapaka sy mibaiko ary manandevo ny olombelona, ka homeny ny sakafon'ny ozona sy mofo ny fahafatesana ny olombelona.
Na dia izany aza, Andriamanitra amin'ny maha Andriamnitra Fitiavana Azy dia tsy nitsahatra nitady vaha-olana hamerina ny olombelona hiverina Aminy.
Ary io fitiavany io indrindra no manosika Azy hitady sy mamolavola vahaolana hatrany.
Ka, ny vahaolana farany nomeny, dia Izy Tenany mihintsy no nidina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, Zanaka.
" Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany Lahy Tokana..." (Jao.3:16a)
Ary ny Zanaka, nanetry tena, nanaiky ho Iraky ny Ray, mba hitondra ny fahotan'ny olombelona, ny ozon'ny fahafatesana. Ka dia tonga Nofo, tonga olombelona ( Jao.1:1,14).
Ary hoy indrindra Jaona mpanao batisa raha nanambara an'i Jesosy izy :
"Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, izay mitondra ny fahotan'izao tontolo izao" (Jao.1:29)
Koa mba hahatanteraka izany, dia nanolotra ny Tenany sy Rany Jesosy teo ambon'ny hazo fijaliana, toy ilay voa tao Edena, nitondra ozona sy fahafatesana araka ny voasoratra hoe "voaozona izay mihantona amin'ny hazo", ka dia nihatra taminy ny ozona sy ny fahatesana (Gal.3:13).
Nivesatra ny fahotantsika tokoa Izy, nitondra ny fahafatesantsika tokoa Izy, tamin'ny nanolorany ny Tenany sy ny Rany mba hamonjena antsika ho hafaka amin'ny fahefana sy gadran'i Satana, Ilay nanana ny herin'ny fahafatesana.
Taratra ao amin'ny batisa masina izany, niaraka voahombo sy miara maty ary niaraka nalevina tamin'i Kristy Jesosy ny mino ary miaraka mitsangana Amiko, niala tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ka tonga olom-baovao izay nateraka indray tamin'ny alalan'ny Rano sy Fanahy ( Jao.3: 5-7), koa amin'izany, dia tsy misy fanamelohina intsony ho an'izay rehetra ao amin'i Kristy Jesosy, nafahana tamin'ny ozona sy ny fahatesana.
Ary amin'izany rehetra izany indrindra no hanambaran' Jesosy fa Izy no MOFOn'aina, fa tsy mofon'ny ozona sy fahafatesana, fa kosa MOFO mitondra fahavelomana sy Fiainana.
Ny Sakramenta ny fanasan'ny Tompo, amin'ny alalan'ny Mofo sy Divay izay hanantonantsika ny latabatrin'ny Tompo no hanomezany ny mino ny Tena aman-dRan'i Jesosy. Miafina ao ambadik'ireo elemanta roa ireo ny zava-miafina ny maha Mofon'aina any Jesosy.
Ankehitriny, dia olona afaka ny mino Azy, noho ny fanavotana vitan'i Jesosy, satria efa voavidin'ny Rany tamin'ny nanolorany ny Tenany. Antoka feno ho an'izay mino Azy izany ka hanasany ny olona rehetra handray ny Tenany sy hisotro ny Rany mba ahazoany manome fiainana ho an'izay rehetra mino Azy.
Indrisy anefa, fa maro no mbola miraparapa ao anatin'ny aizin'ny ozona sy fahafatesana, ary mbola eo ambanin'ny fahefan'ny Devoly sy Satana, ka fitahiny amin'ny mofon'ny rendrarendra mety levona (Jao. 6:27).
Ry fiangonana malala, mbola te hampatsiahy ahy sy ianao Jesosy fa lafo vidy ny nanafahany antsika teo amin'ny ozon'ny fahafatesana sy fahefan'ny Satana., satria sarobidy Aminy tokoa isika na dia efa nihodina Taminy aza, nefa nanao izay azony natao Izy mba hamonjeny antsika.
Mba fantatr'isika ve ny halalin'izany?
Koa aza variana mitady hanina mety levona, fa tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy Mamôna isika, k ny kibony no andriamaniny. Aza mety latsaka amin'ny fakam-panahy sy fandrik'i Satana, izay mahajamba mahatonga fahaverezana sy fahafatesana.
Ny mampalahelo indrindra, ry havana, dia ny mbola hahitana kristiana maro, tsy mahatsapa ny halalin'ny fitiavan-dehibe tamin'ny nanolorany ny Tenany sy ny Rany. Kristiana ihany, toy ireo nitady an'i Jesosy satria voky, lasa fitadiavana "intérêt" ny amin'ny nofo no "motivation" hanantonany an'i Jesosy.
Hoy isika hoe "ireo setka"ireo dia vola no ao ambadika ary mampanantena ireo izay manaraka azy ho hahazo harena be. Marina tokoa izany.
Indrisy anefa fa maro ny kristiana mbola latsaka amin'ny fitiavam-bola sy mitady harenan'ny tany, ka indraindray dia lasa fitaovana hitadiavana vola sy hitadiavana voninahitra ny tempoly.
Ry havana, manome toky antsika Jesosy, fa Azy isika, efa novidiny tamin'ny Rany sarobidy, ary manolotra antsika ny Tena MOFO hahavelona antsika.
Koa na dia eo aza ny herin'ny fahafatesana manoloana antsika ankehitriny, vokatrin'ny fihinana ny mofon'ny ozona sy fahafatesana , dia ny Ran'i Jesosy mandrakotra antsika, ka tsy hisy hahakasika antsika na handrombaka antsika eo an-tanany.
Aza manahy, aza mimonomona, aza matahotra.
Ampy sy feno ho antsika Jesosy, MOFOn'aina.
Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. AMEN !
Mise à jour le Dimanche, 22 Mars 2020 19:14